Raspberry Pi GPIO Intro – Ubuntu MM
Raspberry Pi GPIO Intro
Guide Knowledge Raspberry Pi Tutorials
08/07/2016 08/07/2016 kokoye2007 
linux@gpio ~#cat readme.txt
What is GPIO ? How can do with GPIO ? and Its basic usage
ကျနော်အခု rasppberry pi ကနေ Gpio ကို python programming ကနေ တဆင့် ထိန်းချုပ် တဲ့ ပုံစံလေးကို ရှင်းပြချင်ပာတယ်။
GPIO (general purpose input/output ) pin အရေအတွက်ဟာ ကျနော်တို့ အသုံးပြု တဲ့ raspberry pi model အလိုက် ကွဲလွဲမှုတွေရှိနိင်ပာတယ်။
raspberry pi 1 model A/B တွေမှာ GPIO pin 26 pin ပဲပါတယ်။
pi 1 model B+ , A+ , pi2model B နဲ့ pi3model B မှာ ကျတော့ GPIO pin 40 ပာပာတယ်။
GPIO pin ကနေ ဘာတွေလုပ်လို့ရလို့လဲ ။ အရေးကြီးလို့လား ။
ကိုယ်သုံးတဲ့ပော်မှာ မူတည်ပာတယ်။ media server လိုမျိုးတို့ ၊ file server တို့ လိုမျိူ;ပဲ စမ်းချင်တာ ၊ လုပ်ချင်တာဆိုရင်တော့ GPIO pin တွေအကြောင်း မသိရင်လည်း ရပာတယ်။ အကယ်လို့ Home automation ပိုင်းတွေ ( example အနေနဲ့ လက်ခုပ်တီးလိုက်ရင် မီးဖွင့်တာတို့ ။ မီးမှိတ်တာတို့ ။ ရေကန်ထဲမှာ ရေ မရှိရင် ရေစက်ကို auto
မောင်းတင်ခိုင်းတာတို့ ) ၊ robotic ပိုင်းတွေ ၊ electronic device တွေ ၊ sensor တွေနဲ့ ချိတ်ဆက်လုပ်ချင်တာမျိုးတွေကျ GPIO ကမသိမဖြစ် လိုအပ်လာပာတယ် ။
GPIO pin တွေနဲ့ အလုပ်လုပ်တဲ့ အခာမှာ သိထားသင့်တာလေးတွေကို အောက်မှာတချက်လောက်ဖတ်ကြည့်ပာ ။
(၁). GPIO pin တခုချင်းစီကနေ ယူတဲ့ current က 3mA ထက်မပိုသင့်ပာ။
(၂). GPIO pin တွေကို raspberry pi power on ထားချိန်မှာ screw driver နဲ့ ထိခြင်း ၊ metal object တခုခုနဲ့ ထိခြင်းမလုပ်ပာနဲ့ ။
(၃). Pi ကို power ပေးတာ 5V ထက် မကျော်ပာစေနဲ့ ။
(၄). 3.3V supply pins တွေဆီကနေ ယူသုံးတဲ့အခာ total 50mA ထက် ပိုမသုံးသင့်ပာ ။
(၅). 5.5V supply pins တွေဆီကနေ ယူသုံးရင် total 250mA ထက်ပို မသုံးသင့်ပာဘူး ။
GPIO pin တွေကို ဘယ်လိုအသုံးချမလဲ ။
programming languages တွေနဲ့ program တွေရေးပြီး GPIO pin တွေကို အသုံးချနိုင်ပာတယ် ။
အခု ကျနော်က python programming နဲ့ GPIO ကို access လုပ်တာလေးပြချင်ပာတယ် ။
လိုတာကတော့ python library လေးဖြစ်တဲ့ Rpi.GPIO လိုပာမယ် ။
အဲ့ဒီကောင်လေးက python နဲ့ native C ပုံစံကို wrap လုပ်ပြီး Input / Output ပိုင်းကို မြန်ဆန်စေဖို့အသုံးပြုတယ် ။
ကျနော် installation processကို raspbian OS အသုံးပြု ပြီး ပြပာမယ်။
raspbian OS ကို အသုံးပြုမယ်ဆို ( http://vx2-downloads.raspberrypi.org/raspbian/images/raspbian-2016-05-31/2016-05-27-raspbian-jessie.zip ) အဲ့link ကနေ download ရယူုနိုင်ပာတယ် ။
အဲ့တာကိုသွင်းဖို့ အတွက် အရင်ဆုံး terminal ကနေ
အစဉ်လိုက် တကြောင်းချင်းစီရိုက်ထည့်ပေးပာ ။
အရင်ဆုံး repositories တွေကနေ ရနိုင်မယ့် package တွေကို update လုပ်ပာတယ် ။
ပြီး ရင် ကိုယ့်စက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ software တွေကို upgrade လုပ်ပာတယ်။
နောက်တဆင့်က python-dev ကို သွင်းပာတယ်။
ပြီးတော့ library ကို သွင်းပာတယ် ။
Ok , အခုမှ စမှာဗျ။
python နဲ့ GPIO control program တွေရဲ့အစတိုင်းလိုလိုမှာ
import Rpi.GPIO as GPIO လို့ရေးပြီး GPIO functions တွေကို GPIO name ပေးပြီးခော်သုံးပာတယ် ။
ပြီးတော့ GPIO pin တွေကို သုံးဖို့ mode ရွေးရပာတယ်။
mode သတ်မှတ်တဲ့နေရာမှာ2မျိုးရှိပာတယ်။
(၁) BCM numbering ပုံစံ
(၂) Board numbering ပုံစံ
BCM numbering mode ဆိုတာက GPIO pin တွေကို broadcom soc channel အနေနဲ့ refer လုပ်တာပာ ။
Board numbering modeဆိုတာက GPIO pin တွေကို နံပာတ်စဉ်လိုက် သတ်မှတ်တာပာ ။
သေချာနားလည် သဘောပောက်အောင် အပော်ကပုံလေးနှစ်ပုံကို ပြန်ကြည့် ကြည့်ပာ ။
လေးထောင့်တုံးလေးတွေမှာရေးထားတာက BCM အနေနဲ့ သတ်မှတ်တာပာ ။ အလယ်ကပုံစံက board အနေနဲ့သတ်မှတ်တာပာ ။
GPIO.setmode(GPIO.BCM) (refer GPIOpins as BCM numbering)
GPIO.setmode(GPIO.BOARD) (refer GPIOpins as BOARD numbering)
ကျနော် နောက်ပိုင်း BCM mode အနေနဲ့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ပုံစံနဲ့ပဲ ဆက်ပြသွားပာမယ် ။
GPIO.setwarnings(False) ဆိုပြီး GPIO runtime warning ကိုdisable လုပ်ထားလို့ရပာတယ်။
ပြီးရင် input or output အတွက်သတ်မှတ်ပေးရပာတယ် ။
GPIO.setup(7,GPIO.OUT) #set GPIO7as output
GPIO.setup(8,GPIO.IN) #setup GPIO 8 as input
GPIO.setup(23,GPIO.IN,pull_up_down=GPIO.PUD_DOWN) #set GPIO 23 as input and enable pull-down resistor on pin 23
GPIO.setup(24,GPIO.IN,pull_up_down=GPIO.PUD_UP) #set GPIO 24 as input and enable pull-up resistor on pin 24
GPIO7နဲ့ 8 သတ်မှတ်တာကတော့ ပုံစံရှင်းပာတယ်။ output input ရိုးရိုးပာပဲ ။
23 နဲ့ 24 မှာတော့ ကျနော်တို့ input မှာ pull-up , pull-down resistor သတ်မှတ်ပာတယ် ။
pull-up pull-down ဘာလို့သတ်မှတ်တာလဲ ။ မသတ်မှတ်ရင်ရော မရဘူးလား ။
input မှာ pull up or pull down resistor မချိတ်ထားဘူးဆိုရင် floating state အနေနဲ့အလုပ်လုပ်ပာတယ်။ GPIO input pin ကို ချိတ်ထားတဲ့ wire ကနေ radio wave ၊ electromagnetic radiation ပုံစံမျိုးတွေရပြီး input value တွေကို လွဲချော်ထိခိုက်စေပာတယ်။
OK , motor နဲ့ ပန်ကာဒလက်အကြီးစားတွေလည်အောင် GPIO input pin တွေနဲ့ ထိန်းတယ်ဆိုပာတော့ ။ default အနေနဲ့ပဲထားတော့
မလိုအပ်တဲ့random change of state လိုမျိုး value တွေဝင်လာမယ်ဆိုရင် ပန်ကာကမလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာထလည်တာတို့ လိုမျိုးဖြစ်တတ်ပာတယ်။
pi မှာ built in pull-up pull-down resistor ပာပာတယ် ။
pull_up_down=GPIO.PUD_UP ဆိုပြီး pull up resistor ကို သုံးမယ်လို့သတ်မှတ်ပေးလို့ရပာတယ်။
pull_up_down=GPIO.PUD_DOWN ဆိုရင်တော့ pull down resistor ကို သုံးမယ်လို့ သတ်မှတ်တာပော့။
default ဆိုရင်တော့ GPIO.PUD_OFF ပော့ ။အဲ့ဒာကတော့ ထည့်မရေးလည်းရပာတယ်။
output or input လုပ်တာလေးတွေကိုတချက်ကြည့်ကြည့်ပာ။
GPIO.output(24,1) ( 1 နေရာမှာ GPIO.LOW,GPIO.HIGH,1,0,TRUE,FALSE သုံးလို့ရပာတယ်)
(GPIO 24 ကို output 1 ထုတ်တာလေးပော့)
input=GPIO.input(13) ( GPIO 13 ကနေဝင်လာတဲ့ value ကို input ဆိုတဲ့ variable ထဲသိမ်းလိုက်တာပာ)
နောက်ပြီး GPIO pin တွေကနေ clock generator ပုံစံထုတ်လို့ရပာ
GPIO.setup(4,GPIO.ALT0) #GPIO4ကို clock genအနေနဲ့ သတ်မှတ်တယ်
GPIO.setclock(4,64000) #clock frequencyကို HZ အနေနဲ့သတ်မှတ်တယ်။
# frequency က 4640 ကနေ 19000000 range ထဲပဲ ရှိသင့်တယ်။
GPIO.output(4,1) # turn on the clock
GPIO.output(4,0) #turn off the clock
GPIO.setclock(4,500000) #frequency ပြန် changeတယ်#
GPIO.cleanup() #GPIO pin တွေအာားလုံးကို reset ပြန်လုပ်တာပာ။
အခုက GPIO module ထဲကအခြေခံ လေးတွေကိုပြောပြတာပာ ။
သူ့ထဲမှာမှ နောက်ထပ် function (eg . wait_for_edge တို့ add_event_detect တို့ ) တွေကို ဆက်လေ့လာကြည့်ပာ ။
ပြီးတော့ i2c ဆိုတဲ့ servo motor တို့ pulse width modulation ပိုင်းတွေနဲ့ ဆက်စပ်လုပ်ဆောင်တဲ့ library အကြောင်းလေးလည်း
raspberry pi device က linux base OS တွေနဲ့ အလုပ်လုပ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် linux command တွေကိုလည်း မဖြစ်မနေသိထားသင့်ပာတယ်။
အဲ့ဒာကြောင့် အသုံးများတဲ့ linux command တွေနဲ့ ထိတွေ့နိုင်အောင် ဆက်ရေးပာ့မယ်။
command တကြောင်းမှာ command / option(switch) / argument ဆိုပြီး သုံးပိုင်းခွဲနိုင်ပာတယ်။တချို့ command တွေကျ argument လိုပာတယ် ။ တချို့ကျတော့မလိုပာဘူး။
အခုပြောမယ့်ထဲမှာတော့ သိဖို့လုံးဝလိုအပ်တဲ့ command switch လေးတွေပဲထည့်ပြောပေးပာ့မယ်။
~ means can replace with another.
uname -a ( print all system information)
uname –help ( get some info about uname command)
ls -al (list all with long format)
uptime -p ( system runtime)
df -h ( disk space usage in human readable form)
whoami ( print current user)
cd ~location ( change directory)
mkdir ~directory ( make directory)
rm -r ~directory (delete directory)
cp -i ~sourcefile ~newfile ( copy )
whatis ~ls ( display one line manual for ls command )
top ( display process)
clear (clear terminal )
reset (reset terminal)
date (print date time info)
cal (print calender)
touch ~file (create file)
pwd (print current working directory)
ping -c3 ~www.google.com ( ping google3time)
head ~file ( output first part of file)
tail ~file (output last part of file)
cat ~file (output entire file)
less ~file ( output file less)
more ~file (output file more)
မသိမဖြစ်သိထားသင့်တဲ့ Linux commandလေးတွေပာ။
Tagged Burma, GPIO, guide, IoT, myanmar, RaspberryPi, ubuntu, ubuntumm
Raspberry Pi Easy IoT Intro
Ubuntu သွက်လက် မြန်ဆန်စေမည့် နည်းလမ်းများ